Soomaali (Somaliska) - www.trafikverket.se
Halkaan waxaad ka heli doontaa macluumaadka soomali ee ku saabsan shatiga wadista iyo tijaabooyinka wadista. Waxa kale oo aad ka aqrisan kartaa waxa ku saabsan Maamulka Gaadiidka Sweden iyo sida ay noola soo xiriiraan.
Macluumaadka ay soo saareen Maamulka Gaadiidka Iswidhan ee soomaliga waa mid kooban. Macluumaad faahfaahsan oo ku saabsan howlaha Maamulka Gaadiidka Iswidhan iyo howlaha ayaa lagu heli karaa afka Ingiriis.
Maamulka gaadiidka dalka Iswiidan waa hey'ad mas'uul ka ah qorsheynta kaabayaasha mustaqbalka fog ee gaadiidka waddooyinka, tareenada, maraakiibta iyo duulista. Maamulka gaadiidka dalka Iswiidan wuxuu dhisaa, dayactiraa oo maamulaa waddooyinka dadweynaha iyo tareenada. Ficil ahaan, tan micnaheedu waa inaan hubinno in nidaamka gaadiidku uu shaqeynayo.
Maamulka Gaadiidka ee Sweden, waxaad ku qaadan kartaa tijaabooyin aqoon iyo tijaabooyin wadis oo loogu talagalay shatiga wadista caadiga ah iyo inaad awood u yeelato inaad si xirfad leh ugu shaqeyso darawal taksi. Waxaad sidoo kale qaadaneysaa tijaabooyin aqoon xirfadeed oo ku saabsan rukhsadaha hawlgalka iyo tijaabooyinka aqoonta ee darawalada xirfadleyda ah.
La xiriir Maamulka Gaadiidka Sweden
Kooxda adeegga macaamiisha ee Maamulka gaadiidka Iswiidhan ayaa ku caawin kara haddii aad ku hadasho luqadda Iswidishka ama Ingiriisiga
Kooxda adeegga macaamiisha ee Maamulka gaadiidka Iswiidhan
Su'aalaha ku saabsan wadada, wadada tareenka ama iskuxirka doonta iyo su'aalaha kale, wac 0771-921 921 Isniinta - Jimcaha 8.00–16.00 (24/7 wixii ku saabsan macluumaadka taraafikada iyo arrimaha degdegga ah ee u baahan tallaabo degdeg ah).
Su'aalaha ku saabsan tijaabooyinka wadista ama sawirrada, wac 0771-17 18 19 Isniinta - Arbacada, Jimcaha laga bilaabo 8.00–16.15 Khamiista laga bilaabo 8.45-16.15 (24/7 si loo joojiyo).
Annaga, waxaad qaadan kartaa tijaabooyin qoraal ah iyo tijaabooyin wadis oo loogu talagalay mootooyinka yar-yar, gawaarida, mootooyinka, looriyada, basaska iyo cagafyada, laakiin sidoo kale inaad awood u yeelan karto inaad si xirfad leh ugu shaqeyso sida darawal taksi iyo tijaabooyin kale oo darawalnimada xirfadlayaasha kale.
Adigoo adeegsanaya adeegga ballansashada waad ballansan kartaa, joojin kartaa oo bixin kartaa tijaabadaada. Waxaad sidoo kale ka wici kartaa kooxdeena adeegga macaamiisha +46 (0) 771-17 18 19. Adeegga ballansashada waxa lagu heli karaa af Iswiidhish iyo Ingiriisi.
Waxaad dooran kartaa in sawirkaaga aad haysato kasoo anagu aan qaadney markaad cusboonaysiinayso shatiga baabuur-wadidda.
Macluumaad dheeri ah oo ku saabsan shatiga wadista ee af Ingiriisiga
Xafiisyadeena meesha sawirkaaga lagaaga qaadi karo
La xiriir kooxda adeegga macaamiisha ee Maamulka Gaadiidka ee Sweden haddii aad wax su'aalo ah qabtid. Waxaan ku hadalnaa af Ingiriis iyo Iswidhish.
Waxaan soo aruurinaa macluumaadka shaqsiyeed
Maamulka Gaadiidka Sweden wuxuu gacanta ku hayaa macluumaadka shaqsiga ah iyadoo la raacayo Xeerka Ilaalinta Xogta Guud (GDPR). Ka akhriso wax dheeraad ah oo ku saabsan xuquuqdaada. Macluumaadka waxaa lagu heli karaa af Iswiidhish iyo Ingiriisi.
Hay'adda Gaadiidka ee Sweden
Waxaan kuu gudbin doonnaa Maamulka Gaadiidka ee Sweden wixii su'aalo ah oo ku saabsan sida loo bixiyo kharashka saxmadda, waxa la samaynayo marka aad iibsato ama iibiso baabuur ama sida aad si ku meel gaar ah uga saarto diwaanka baabuurkaaga.